Oxygen Concentrator Vanopa uye Fekitori | China Oxygen Concentrator Vagadziri
AngelBiss Oxygen Concentrators Chikumbiro
AngelBiss iri kutungamira kugadzira kwese kuyerera renji oxygen concentrators neepamberi PSA tekinoroji muChina. AngelBiss ichapa mhinduro dzakasiyana zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zvekushandisa kwevatengi.
Zvekudiwa kweoksijeni kwemumwe, mhuri nemakiriniki madiki, AngelBiss diki kuyerera oksijeni concentrators inosangana nezvavanoda.
Kune makuru makuru ekurapa uye mafekitori, AngelBiss inogona kupa yakazara seti yeoksijeni yekupa masystem, ayo akagadzirwa, akagadzirwa, uye akaisirwa panzvimbo saiti yekushandisa munda.
Pamusoro pekushandisa kwekurapa, AngelBiss oxygen concentrators inogona zvakare kushandiswa mumaindasitiri minda, kusanganisira maozone jenareta, girazi-basa kugadzira, kurima kweacaculture / hove, kurapwa kwemvura yakasviba, kunyorera simbi, nitrogen uye oxygen kupatsanurwa uye zvimwe zvinoshandiswa.
AngelBiss inogona kupa inoenderera uye yakachengeteka sosi yeiyo yakachena-kuchena okisijeni kune iri pamusoro akasiyana mamiriro ekushandisa.
Rechargeable 5L Oxygen Concentrator ine Yakakwira Yakachena 93% (AC, DC, Mabhatiri)
ANGELBISS, Yekutanga kugadzira yenyika yekutanga bhatiri yakaitwa 5LPM Oxygen Concentrator. Kunyangwe kuburitsa 93% kuchena O2 pa5L / min kuyerera.
ANGEL5SB nhepfenyuro ndeimwe yeanotakurika 5L okisijeni concentrator ine yakazara yakazara alarm system, chaiyo yekukanganisa chiratidzo, uye yakanyanya kugadzikana chengetedzo kuita pamusika. Yakapfuura CE uye ISO13485 certification.
1.Durable Lithium Bhatiri Akavhiyiwa DC 24V
2.Fast recharge mumaminetsi zana nemakumi maviri, Inoenderera inomhanya maminetsi zana nemakumi maviri (maawa maviri)
3.5Liter ine 93% ± 3% okisijeni kuchena kuburitsa kwevashandisi veCOPD
4.Oxygen Chakachena Ratidza neNhamba (Kururamisa 00.0%)
5.Timer & Bata akavhiyiwa mabhatani
6.Large 6 'LED Chiedza Ratidza data rese rinoshanda
7.Akaunganidzwa akazara ekumhanya maawa
8.Kushandisa kwakasimba kwenzvimbo dzenzvimbo pakushisa kwakanyanya (45ºC), kukwirira kwakakwirira (15000feet).
Zvimwe zvakasarudzika zvinongopihwa neAngelBiss Technology
1.Bhatiri rekutanga repasi rese rakashanda 5LPM @ 93% Oxygen Concentrator.
2.Automatic rinorema mwando bvisa mamorekuru nesefa
3.Independent Oxygen nzira yekubuda & nebulizer nzira yekubuda
4.Child Lock marongero
Kunyorera uye kuongorora kweAngelbiss oxygenconcentrator Angeibiss okisijeni zvigadzirwa zvinogona kupa mhinduro dzakasiyana zvichienderana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi.
Iyo jenareta diki inogona kusangana nezvinodiwa neoksijeni zvemhuri, vanhu pamwe nemakiriniki madiki.
Kune makuru makuru ekurapa uye mafekitori, isu tinopa yakakwana seti yeoksijeni yekugovera masystem, ayo akagadzirwa, akagadzirwa, uye akaisirwa pane-saiti zvinoenderana nehukuru hwekushandisa.
Angelbiss okisijeni jenareta inogona kushandiswa mumaindasitiri minda, kusanganisira ozone jenareta, girazi kugadzira, aquaculture, tsvina tsvina, maindasitiri simbi, nitrogen uye oksijeni kupatsanurwa, etc.
Angelbiss inogona kuenderera ichienderera uye yakachengeteka yakakwira-yekufungisisa okisijeni yezviitiko zvataurwa pamusoro.
Kana iwe uine chero mibvunzo pamusoro pedu, unogona kutirovera runhare pa info@angelbisscare.com, uye vashandi vedu vebasa vachakubata iwe nekukurumidza.
ANGELBISS, Yekutanga yekutarisa paKushanduka kwemweya weokisijeni, yekutanga INOGONA kudzora mwero wekuchinja mukati me0.1%.
ANGEL5S akateedzana ndeimwe yeanotakurika 5L okisijeni concentrator ine yakazara yakazara alarm system, chaiyo yekukanganisa chiratidzo, uye yakanyanya kugadzikana chengetedzo kuita pamusika. Yakapfuura CE uye ISO13485 certification.
1.A Kubata kunoshanda akawanda-anoshanda zvikamu.
2.5Liter ine 93% ± 3% okisijeni kuchena kuburitsa kwevashandisi veCOPD
3.Oxygen Yakachena Ratidza neNhamba (Kururamisa 00.0%)
5.Large 6 'LED Chiedza Ratidza data rese rinoshanda
6.Akaunganidzwa akazara ekumhanya maawa
1.Yenyika kwete. 1 Oxygen Kubuditsa Purity Kuchinja kwehuwandu hunodzorwa mukati me0.1%.
4.Child Lock zvirongwa
5.3 makore garandi kana 18000hours hupenyu hwese
6.Kushandisa kwakasimba kwenzvimbo dzenzvimbo pane yakanyanya kupisa (45 (C), kukwirira kwakakwirira (15000 tsoka)
AngelBiss zvakare inopa makiriniki uye zvipatara zvidiki zvine hombe kuyerera oksijeni concentrator anosvika munzvimbo inokwana kubva 10LPM kusvika 100LPM.
Vatengi vanogona zvakare kugadzirisa okisijeni concentrators ane akawanda okisijeni zvitoro zvinoenderana nezvavanoda. Isu tinobvuma kugadziriswa kweiyo yakakwira-yekumanikidza oxygen concentrators (yakanyanya oxygen okisheni yekumanikidza inogona kusvika 6 bar). Iyo yakanyanya-kumanikidza okisijeni concentrator inogona kusunganidzwa neakanyanya kufefetera kupa oxygen kune inorema basa varwere.
Chiremba Oxygen Concentrator
AngelBiss Oxygen Concentrator ine otomatiki mashandiro, inogona kupa yakachena-yakachena okisijeni inosangana nematanho ekurapa emakiriniki, zvipatara, nevarwere vanofanirwa kufema oxygen kumba.
Kune zvipatara zvakakura zvine mapaipi ekuapa okisijeni, AngelBiss inogona kupa ekurapa oxygen oxygen system ine huwandu hwakanyanya hwe200 Nm³ / hr, iyo inogona kuzadzikisa kudiwa kweoksijeni kwemubhedha chiuru muchipatara. Iyo okisijeni inounzwa neAngelBiss oksijeni yekupa system inoenderana nematanho ekurapa neiyo oxygen yakachena ye93% (93% ± 3%).
AngelBiss Chiremba Technology